I-Petroleum Refinery-Newway Valve Co., Ltd.
I-petroleum refinery ibhekisela kwisityalo esivelisa idizili, i-petroli, i-kerosene, i-oyile yokuthambisa, i-petroleum coke, i-asphalt, kunye ne-ethylene kwiinkqubo ezifana ne-distillation, i-catalysis, i-crack, i-crack, kunye ne-hydrorefining ye-oyile ekrwada ekhutshwe ekubunjweni.
Iivalve eziveliswe yi-NEWSWAY zinokuhlangabezana ngokupheleleyo neevalve ezahlukeneyo ezifunwa yi-refinery ukukhusela umlilo, ukuqhuma kunye nezinye iimeko ezinobungozi kunye nokuqinisekisa ukusebenza ngokukhuselekileyo kwezixhobo.
Kwiiyunithi zokucoca, iiyunithi ezisetyenziswa ngokuqhelekileyo kunye nokukhethwa kwevalve ehambelanayo eyenziwe yi-NEWSWAY valve:
Izixhobo zeCatalytic: iivalve zeplagi, iivalve zokudambisa indlela enye, iivalve zebhabhathane lobushushu obuphezulu, iivalve zebhabhathane zepneumatic, iivalvu zesango lobushushu obuphezulu, ubukhulu becala iivalvu ezixhathisa ubushushu obuphezulu.
Imveliso yeHydrojeni, i-hydrogenation, iyunithi yokuguqula: Ivalve yebhola ye-orbit, ivalve yokulawula, i-Y-type globe valve, i-hydraulic butterfly valve, ivalve yoxinzelelo oluphezulu, uxinzelelo luhlala luphezulu kune-1500LB.
Isixhobo sokuphekela: iveluve yebhola enamacala amabini, i-valve yebhola yeendlela ezine, i-valve yeplagi, ininzi isekelwe kwi-valve ephezulu yokushisa, izinto eziphathekayo ziyintsimbi ye-chrome-molybdenum. Iivalvu zebhola ezitywiniweyo ezinoxinzelelo oluphezulu, ngokuqhelekileyo ukusuka kwi-1500 LB ukuya kwi-2500 LB.
Iyunithi ye-atmospheric kunye ne-vacuum distillation: ivalve yesango yombane, eyenziwe nge-chrome molybdenum kunye nentsimbi engenasici
Isixhobo sesalfure: ivelufa yebhatyi engundoqo, ivalve yesango enebhatyi, ivalve yebhola efakwe ibhatyi, ivalve yeplagi enebhatyi, ivalve yebhabhathane enebhatyi.
Isixhobo se-S-zorb: Ivalve yentsimbi yentsimbi eqinileyo, efunekayo ukunxitywa kunye nobushushu obuphezulu.
Iyunithi yePolypropylene: intsimbi engatyiwa valve yebhola yepneumatic
Akukho sixhobo sikhethekileyo: ubukhulu becala ivalve yokulawula: ivalve yebhabhathane yepneumatic, ivalve yebhola yomoya, ivalve yecandelo lomoya, ivalve yokulawula iglowubhu njalo njalo.